Kitsi yangu inofemeruka | Noti Katsi
Nei kitsi yangu ichifemereka
Kana katsi yakakura ikabvaruka, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kunetsekana, nekuti hazvina kujairika kuti mhuka idzi dzipururudze. Asi kana iye anozviita ari katsi, mhosva yacho inogona kutonyanya kutyisa kana zvichibvira, nekuti hupenyu hwake hunogona kunge huri munjodzi.
Tichifunga izvi, isu tinofanirwa kuziva sei katsi yangu ichifemereka uye zvekuita kuitira kuti mamiriro acho asanyanya kuwedzera.
Kune zvimwe zvikonzero zvemuviri zvinoita kuti kati yako itange kufema muromo wayo wakashama. Izvo zvinodikanwa kuti iwe uzvitorere mukati kuti uzive kana chiri chikonzero nei uchifanira kuenda kuna vet kana kana zvisiri izvo.
1 Kupisa kwakanyanya
2 Zvinetso zvemwoyo kana kufema
4 Kufungisisa kwaFlehmen
5 Aneta chaizvo
6 Inzwa kushushikana kwakawanda
7 Zvirwere izvo zvichaita kuti kati yako ifemere nemuromo wayo wakashama
8 Ine chimwe chinhu mumuromo
Kittens dzinogona kufema nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka. Iyo yakanyanya kuwanda ndeyeyeye yakanyanya tembiricha. Kana tine bindu uye isu tiri pakati pezhizha ne 35ºC kana kupfuura, kana tikaona kuti vanofemereka pakutanga hatizotya, nekuti ndiyo nzira yavanofanira kudzora tembiricha yemuviri wavo. Ikozvino, kana vari kufemereka mukati meimba uye yavo tembiricha tembiricha iri 39ºC kana kupfuura, ipapo isu tichafanirwa kuenda navo kun'anga sezvo vachange vaine fever.
Zvinetso zvemwoyo kana kufema
Chimwe chikonzero ndechekuti vane kusagadzikana kwemoyo. Kunyangwe zvisiri zvakajairika mumakiti, zvinokurudzirwa kuongorora kana tichifungidzira kuti vane dambudziko remwoyo, kunyanya kana vachibva mumugwagwa, sezvo vaigona kuve nechirwere chemoyofilariasis), inokonzerwa nezvipembenene.
Iwe unogona kumuona achirova achienderera mberi kana kazhinji, uye nguva dzose, zvichave zvakafanira kuona nyanzvi yezvipfuyo kuona kuti haisi moyo unonetsa kana chirwere chekufema. Hatigone kudzora kusagadzikana kwekufema, senge asthma. Muviri wekati unofanirwa kuita nhamburiko huru kuti ugone kufema huwandu hwainoda hweoksijeni, nekudaro, unofanirwa kubvunza nyanzvi nekukurumidza sezvazvinogona.
Kunyangwe iri katsi inoenda kunze kana kuti kwete, chimwe chikonzero chekufemereka chepfu. Mumba nekunze mune zvigadzirwa zvinoverengeka zvine chepfu kwaari. Kana ukangozvidya, pamusoro pekupemha, iwe unonetseka kufema, kudonhedza zvakanyanya, kunetsekana kumira, kuda kurutsa, uye / kana kugwinha. Mune zviitiko izvi, mhuka inofanirwa kuendeswa nekuchimbidza kuna chiremba wemhuka.
Iwe unogona kunge wakamboona katsi yako yakashama muromo ... asi kwete kufemereka. Izvi zvinowanzoitika kana iwe uchinhuwira chinhu chaunofarira kana icho chingobata pfungwa dzako. Izvi zvinonzi iyo Flehmen reflex.
Iyo reflex inoitika mukitsi nekutenda kune yavo marutsi yemuviri u Nhengo yaJacobson. Nhengo iyi iri pakati pemukanwa nemhino dzemadzvinyu.
Iko kufungidzira uko kati inonhuwa kubva pamuromo wayo uye inoshandisa rurimi rwayo kuifambisa ichienda kunhengo iyi yakakosha. Nenzira iyi unogona kuongorora kunhuwidza zvakadzama, kunyangwe chinangwa chako chiri chekuongorora pheromones iri mumuti wedzimwe katsi uye saka kuti uzive kana iri murume kana mukadzi, kana feline iri mukupisa, kana kana ndima yatove yavo.
Kunyangwe mumba mako iwe uchiona katsi yako ichiita izvi mushure mekunhuwira gumbeze kana sokisi, semuenzaniso. Muchiitiko ichi, hazvidi kuti uende naye kuna chiremba.
Imbwa dzinofemeruka nekuti dzaneta, asi katsi hadziite, nekuti dzinogara dzichifema nemumhino dzadzo. Naizvozvo, kufemereka hakuwanzoitika kune katsi uye zvakajairika kuti varidzi vanetseke kana vakaona katsi yavo ichifemera.
Kunyangwe katsi, kana vakaneta nekuti semuenzaniso ivo vakaita yakawanda yekurovedza muviri mune pfupi nguva kana kana ivo vachipisa zvakanyanya, vanogona kufemereka apo neapo uye vanovhura miromo yavo. Kana achinge azorora, anodzokera pane zvakajairika uye ovhara muromo wake orega kufemereka.. Mune ino kesi, iwe haufanire kumutora iye kuna vet kana.
Inzwa kushushikana kwakawanda
Katsi dzinogona zvakare kunetseka zvakanyanya pane dzimwe nguva, semuenzaniso pavanenge vari mumutakuri munzira inoenda kuna vet. Kunetseka kwakanyanya uku kunogona kuita kuti katsi ifemere. Kana kushushikana kwadzikira uye kati yako yave kunzwa zvirinani, inomira kufemereka saka hachisi chinhu chekuti unetseke nezvacho.
Zvirwere izvo zvichaita kuti kati yako ifemere nemuromo wayo wakashama
Iwo mapoinzi atichangobva kuona haana kunetsa nekuti anokanganisa nguva uye ayo anozvipfuura pachawo apo kati inodzokera kune yakadzikama mamiriro ekudzikama. Asi, kune rumwe rutivi, kune mamwe maratidziro ayo inogona kuita kuti katsi dzife nemiromo yadzo yakashama uye kuti mukuwedzera, kushanyira kuna chiremba wemhuka kunokosha.
Ine chimwe chinhu mumuromo
Somuenzaniso, inogona kunge iine matambudziko emuromo, mushaya, kana chimwe chinhu chisingazivikanwe chakanamatira mukati mayo kana kana chipembenene chazviruma mumuromo. Kana izvi zvikaitika uchaona kuti katsi yako inodya zvishoma sei, iine muromo wakashama nguva dzose, kufemereka kana kuhwa mate. Unogona kunge uine mweya wakashata.
Kana katsi yako ichifemereka uye / kana iine muromo wakashama, inogona kukonzerwa neanemia. Iyo katsi ine mashoma masero matsvuku eropa (ane basa rekutakura okisijeni muropa) uye anofanirwa kufema nekukurumidza uye kufemereka kuti aite izvi. Mune ino kesi, zvakakosha kuenda kun'anga kuti uzive kuti ungamubatsira sei.
Kana kati yako yapfuura makore masere uye waona kuti ari kufemereka, zvakakosha kuenda kun'anga kuti utonge kunze hyperthyroidism. Ukatambura nechirwere ichi, unenge watoonawo kuti urikudzikira asi hauna kurasa nzara, asi unodya zvakanyanya asi unoonda.
Iwe unogona kunge wakaziva kuti kune zvakawanda zvikonzero nei katsi yako ingafemi uye / kana kushama muromo. Zvimwe zvikonzero zvikonzero zvekuenda kun'anga uye zvimwe hazvisi. Dzimwe nguva chinhu chechisikigo uye mune vamwe zvakafanira kuti nyanzvi yezvipfuyo iongorore hutano hwayo kuti itonge chero dambudziko uye pamusoro pezvose, kuitira kuti iwe ugone kuwana kurapwa kwakakodzera mune yega yega kesi.
Sekuona kwedu, pane zvikonzero zvinoverengeka nei katsi inogona kufemereka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Nei kitsi yangu ichifemereka
katsi yangu inodzedzereka nekufemereka mumwe munhu anogona kundiudza kuti chii chakaipa ndinotya
Pindura kuna caren
Iwe unogona kunge wakamwa chimwe chinhu chine chepfu. Iwe unofanirwa kuenda naye kuna vet kuti anoongororwa uye kurapwa.
marian giraldo mwenje akadaro
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Marina, ndine katsi yakanunurwa kubva mumugwagwa, ndakauya naye kumba kwangu muna Zvita uye nhasi tiri muna Kukadzi, akatobayiwa nhomba, deworm nekuvhiyiwa, ane mwedzi ingangoita 7, kune vashoma Mazuva, atiza, anomonyoroka, kufemereka, kudonhedza mvura, anoramba ari munzvimbo yekatoni nevadzidzi vakawedzeredzwa, mukuita kudaro makumbo efanicha anosangana nemadziro uye haanyunyuti, anobva aneta, achitarisa kure uye zvibvumirano iye anotanga kunyunyuta nemanzwi akapinza zvakanyanya, ipapo kufema kwake kunova kwakanyanya uye mushure memaminitsi mashanu zvese zvinopfuura, izvi zvinotora maminetsi gumi.
Ini ndinoshamisika kuti katsi yangu inogona kunge iine pfari pfari kana zvimwe zvakafanana.
Pindura kuna luz marian giraldo
Mhoro Luz Marian.
Handikwanise kukuudza, ini handisi chiremba wemhuka. Asi zvirokwazvo hazvisi "zvakajairika" zvinoitika kwaari.
Ini ndinokurudzira kuenda naye kuna vet, kungangoitika.
Ndeipi mhedzisiro yekatsi inodonha?
Inogona kupihwa paracetamol kukati?